လူကြီးရောဂါဆိုတာ – Healthy Life Journal
—–၊ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—–
Q. အရပ်ထဲမှာ ပြောပြောနေကြတဲ့ လူကြီးရောဂါဆိုတာ ဘာကိုခေါ်ပါသလဲ ဆရာ။ (အသက်သိပ်ကြီးတဲ့လူတွေ အိပ်ရာထဲလဲပြီဆိုရင် လူကြီးရောဂါလို့  ပြောတတ်ကြလို့ပါ။)
A. လူကြီးရောဂါလို့ ဆိုရာမှာ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ တစ်မျိုးကတော့ ရောဂါတစ်ခုခု ဖြစ်သွားတာပါ။ သွေးတိုးရောဂါနဲ့  ဆီးချိုရောဂါ..အစရှိတာတွေ ဖြစ်သွားတာပါ။ အဲဒါတွေကတော့ ရောဂါအမည်တပ်လို့ ရတဲ့အတွက် ရောဂါအမည်တပ်လိုက်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ General Debility လို့ခေါ်ပါတယ်။ အစားအသောက်ကို မစားနိုင်၊ မသောက်နိုင် ဖြစ်လာတယ်။ အားတွေနည်းလာတယ်။ ရောဂါကလည်း ရှာလို့မရဘဲနဲ့ နောက်ဆုံး အိပ်ရာထဲလဲသွားပါတယ်။ တချို့ လူကြီးတွေမှာ စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း ( Stress, Depression) တွေ အနည်းနဲ့ အများဆိုသလို ရှိတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ- သွားမကောင်းတော့ဘူး၊ အစားအသောက်တွေကို မစားချင်တော့ဘူး။ အဲဒီတော့ မစားနိုင်၊ မသောက်နိုင် ဖြစ်လာပြီး တဖြည်းဖြည်း အားနည်းလာတာကို ခေါ်ပါတယ်။